Maty hamonjy ny olona rehetra - Mana isan andro
…MATY ny Anankiray hamonjy ny olona rehetra, ka dia MATY koa izy rehetra; ary maty hamonjy ny olona rehetra Izy, MBA TSY HO VELONA HO AN’NY TENANY INTSONY izay velona, fa ho an’izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy.
Izany ny olona nandray ny famonjena, TSY IZY INTSONY NO ZAVA-DEHIBE fa Ilay maty namonjy azy. Rehefa mbola IANAO sy NY ANAO (na ny anareo) foana no mahatery anao dia mbola tsy azonao izay ny atao hoe « famonjena »!
Ny olako, ny zanako, ny aretiko, ny fahasahiranako, ny projet-ako, ny vision-ako, ny vacance-anay, te ho tahiana aho, te hahomby aho, te hanan-karena aho…
za, za, za foana, mitovy @olona rehetra ihany re izany a! Izany avy no alehan’ny olona any @dadarabe sy ny boule de crystal ary izany koa no antondian’ny olona marobe any am-piangonana, hanenjehana karazana hosotra maro, séminaires, hifadiana hanina, hanaovana ampahafolony sy fanatitra manokana…
Tsy niova fo no anaran’izany fa niova lalana fotsiny, ny ao am-po mitovy ihany @ilay tsy nivavaka na nivavaka fombafomba! Mbola VELONA HO ANAO IHANY IANAO fa tsy ho an’Ilay maty hamonjy anao! Maro ny olona manao be loha fotsiny dia mamaly hoe « tena efa voavonjy aho ka! Manana antoka aho fa hiditry ny lanitra » nefa olona velona ho an’ny tenany ihany,
Ny olona niova fo sy voavonjy MARINA dia izao no ao am-pony: ny olan’ny Tompo, ny mahafaly ny Tompo, ny vision an’ny Tompo, ny mahatery ny Tompo, ny fiainana mandrakizay, ny Fanjakan’ny lanitra…
Izay no atao hoe « velona ho an’ny Tompo » ary izay ianao no atao hoe « NIOVA FO MARINA » ary afaka manana « ANTOKA TENA IZY » fa handova fiainana.
Ka mba diniho tsara aloha hoe tena efa niova fo tokoa ve ianao sao sanatria ho diso fanantenana e! 😊
Am-pitiavana be 😉